Prevacid vs. Prilosec: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည် - မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း | မေ 2022
ရပ်ရွာ ကျန်းမာရေး ကနျြးမာရေးပညာရေး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးအချက်အလက် မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း ဆီးဂိမ်း သတင်း မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအချက်အလက် ဆေးပညာသတင်း, ကျန်းမာရေးပညာရေး အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် ဖျော်ဖြေရေး ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသတင်း, သတင်း ကျန်းမာရေး
အဓိက >> မူးယစ်ဆေးဝါး သူငယ်ချင်း >> Prevacid vs. Prilosec: ကွဲပြားခြားနားမှုများ၊ တူညီခြင်းနှင့်သင့်အတွက်ပိုကောင်းသည်
မင်းရှိရင် GERD (gastroesophageal reflux disease) သို့မဟုတ်အစာအိမ်အနာရှိလျှင်သင်၏ကျန်းမာရေးပြုစုစောင့်ရှောက်သူက PPI (ပရိုတွန် pump inhibitor) ကိုအကြံပြုလိမ့်မည်။ Prevacid (lansoprazole) နှင့် Prilosec (omeprazole) တို့သည်ပရိုတွန် pump inhibitors ဟုခေါ်သောမူးယစ်ဆေးဝါးအတန်းတွင်ရှိပြီး GERD နှင့်အခြားအစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းအခြေအနေများကိုကုသရန်ညွှန်ပြသည်။ Proton pump inhibitors သည်အစာအိမ်အက်ဆစ်ထုတ်လုပ်မှုကိုပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်လျှော့ချခြင်းနှင့်အပူလောင်ခြင်းကိုကာကွယ်ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ဆေးနှစ်မျိုးလုံးကို PPIs ဟုခေါ်ကြသော်လည်း၎င်းတို့တွင်လက္ခဏာများ၊ ကုန်ကျစရိတ်များနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများရှိသည်။
Prevacid နှင့် Prilosec အကြားအဓိကကွာခြားချက်များမှာအဘယ်နည်း။
Prevacid (lansoprazole) နှင့် Prilosec (omeprazole) တို့သည်နှစ်မျိုးလုံးသည်ပရိုတွန် pump inhibitor လူတန်းစားတွင်ရှိသည်။ ဒီဆေးနှစ်မျိုးလုံးကိုကုန်အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ယေဘုယျအားဖြင့်ရရှိနိုင်ပါတယ်။ သောက်သုံးသောညွှန်းကိန်းအရကွဲပြားနိုင်သည်။ Prevacid ၏ပုံမှန်ဆေးညွှန်းသည်နေ့စဉ် ၃၀ မီလီဂရမ်ကိုတစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်၊ Prilosec ၏ပုံမှန်ဆေးပမာဏသည်တစ်နေ့လျှင် ၂၀ မီလီဂရမ်ဖြစ်သည်။
Prevacid နှင့် Prilosec အကြားအဓိကကွာခြားချက်များ
မူးယစ်ဆေးအတန်း ပရိုတွန်စုပ်စက် inhibitor ပရိုတွန်စုပ်စက် inhibitor
ယေဘုယျနာမည်ကဘာလဲ? Lansoprazole Omeprazole
မူးယစ်ဆေးဝါးကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ။ Rx: နှောင့်နှေးလွှတ်လွှတ်ဆေးတောင့်, ပျော်ဝင်နေသောတက်ဘလက်
OTC - နောက်ကျတဲ့ဆေးတောင့် Rx: နှောင့်နှေး - လွှတ်ပေးရန်တောင့, ရပ်ဆိုင်းမှု
OTC: နှောင့်နှေး - ဖြန့်ချိ
စံသောက်သုံးသောကဘာလဲ? အရိပ်အမြွက်ဖော်ပြခြင်းအားဖြင့်ကွဲပြား: များသောအားဖြင့်တစ်နေ့သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ် 15-30 မီလီဂရမ် အရိပ်အမြွက်ပြခြင်းဖြင့်ကွဲပြား: များသောအားဖြင့် 20-40 မီလီဂရမ်တစ်နေ့လျှင်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်
ပုံမှန်ကုသမှုဘယ်လောက်ကြာမလဲ ၁၀ ရက်မှ ၁၂ ပတ်အကြာလူနာအများစုသည်ကြာကြာသောက်ရသည် ၁၀ ရက်မှ ၈ ပတ်အကြာလူနာအများစုသည်ကြာကြာသောက်ရသည်
ဒီဆေးကိုဘယ်သူကပုံမှန်သုံးသလဲ။ အရွယ်ရောက်သူ၊ 1 နှစ်နှင့်အထက်ကလေးများ အရွယ်ရောက်သူ၊ ကလေးများ2နှစ်နှင့်အထက်
Prevacid နှင့် Prilosec မှကုသသောအခြေအနေများ
ဆေးနှစ်မျိုးစလုံးတွင်ကုသမှုအတွက်အရိပ်လက္ခဏာများစွာရှိသည်။ Prevacid နှင့် Prilosec (Prilosec ဆိုတာဘာလဲ?) သည် duodenal အစာအိမ်နာ၊ H. pylori ကိုပပျောက်စေခြင်း၊ ညင်သာပျော့ပျောင်းသောအစာအိမ်အနာ၊ Zollinger-Ellison syndrome နှင့် GERD တို့ကိုကုသရန်ညွှန်ပြသည်။ Prevacid (Prevacid ဆိုတာဘာလဲ) အတွက်အပိုဆောင်းလက္ခဏာများတွင်အနာပျောက်စေသော duodenal အနာများကိုပြုပြင်ခြင်း၊ NSAID နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အစာအိမ်အစာအိမ်နာရောဂါပျောက်ကင်းစေခြင်းနှင့်ကုသမှုနှင့်ပြုပြင်ခြင်း esophagitis (EE) ၏ကုသမှုနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ Prilosec အတွက်အပိုဆောင်းလက္ခဏာများတွင်အက်စစ်မှထုတ်လွှင့်သော GERD ကြောင့် EE ကုသမှုနှင့်အက်ဆစ် -mediated GERD ကြောင့် EE ၏ကုသမှုကိုပြုပြင်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
အခြေအနေ Prevacid Prilosec
duodenal အစာအိမ်နာ၏ကုသမှု ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
၏ပပျောက်ရေး အိပ်ချ် pylori နှစ် ဦး နှစ်ဖက်သန္ဓေတားဆေး (များ) နှင့် တွဲ၍ အသုံးပြုသည်။ ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
ကုသသော duodenal အနာ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူး
တက်ကြွစွာညင်သာပျော့ပျောင်းအစာအိမ်အနာ၏ကုသမှု ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
NSAID နှင့်ဆက်စပ်သောအစာအိမ်အနာကိုကုသနိုင်သည် ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူး
NSAID နှင့်ဆက်စပ်သောအစာအိမ်အနာကိုလျော့ချနိုင်သည် ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူး
လက်ခဏာ gastroesophageal reflux ရောဂါကုသမှု (GERD) ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
တိုက်စားသောအစာပြွန်ရောဂါ (EE) ၏ကုသမှု ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူး
အက်စစ် -mediated GERD မှ EE ၏ကုသမှု မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်
EE ၏အနာရောဂါငြိမ်းစရာ၏ Maintenance ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူး
အက်ဆစ် -mediated GERD ကြောင့် EE ၏အနာရောဂါငြိမ်းစရာ၏ Maintenance မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်
Zollinger-Ellison Syndrome (ZES) အပါအဝင်ရောဂါဗေဒ hypersecretory အခြေအနေများ ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Prevacid သို့မဟုတ် Prilosec သည်ပိုမိုထိရောက်သလား။
တစ် ဦး ကို double- မျက်စိကန်း၌တည်၏ လေ့လာချက် ၃၅၁၀ ဦး တွင်နာကျင်မှုသက်သာစေရန် Prevacid နှင့် Prilosec နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လူနာများသည် Prevacid ကိုနေ့စဉ်ရက်သတ္တပတ် ၃၀ မီလီဂရမ်သို့မဟုတ်ရှစ်ပတ်ကြာနေ့စဉ် Prilosec 20 mg ကိုရရှိခဲ့သည်။ နှစ် ဦး စလုံးမူးယစ်ဆေးဝါးများသည်းခံခဲ့ကြသည်။ Prevacid ဖြင့်ကုသသောလူနာများသည်ပြင်းထန်သောအပူလောင်ခြင်းလက္ခဏာများနှင့်ရင်ပူခြင်းကင်းသည့်နေ့များနှင့်ညများများရှိခဲ့သည်။ သို့သော်ဆေးဝါးများအကြားကွာခြားချက်မှာ ၈ ပတ်အကြာတွင်သေးငယ်ပြီးကျဉ်းမြောင်းသည်။
meta-analysis သည်၌တည်၏ လေ့လာချက် ကာလတိုအသုံးပြုမှုအတွက် PPIs များ၏ထိရောက်မှုကို (လေ့လာမှုများစွာကိုကြည့်ခြင်း) PPIs အားလုံးနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပြီး PPI ကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုခြင်းသည်မည်သည့် PPI ကိုအသုံးပြုသည်ထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်ဟုစာရေးသူများကကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။
အတွက်လေ့လာမှုတစ်ခု Gastroenterology ၏အမေရိကန်ဂျာနယ် အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာ ၀ န်မှဆေးညွှန်း PPI ရရှိထားသည့်လူနာများသည်ဆေးဝါးများသောက်သုံးရာတွင်လိုက်နာရန်ပိုများပြီးရလဒ်အနေဖြင့်ဆေးဝါးများဝယ်ယူသည့်ဆေးများဝယ်ယူသောလူနာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်လက္ခဏာထိန်းချုပ်မှုရှိသည်ဟုနိဂုံးချုပ်လိုက်သည်။
အထိရောက်ဆုံးဆေးဝါးကိုသင်၏ဆရာဝန်ကသာဆုံးဖြတ်သင့်သည်၊ သူသည်သင်၏ဆေးကုသမှုအခြေအနေ (များ)၊ သမိုင်းနှင့်သင်သောက်နေသည့် Prevacid သို့မဟုတ် Prilosec နှင့်ဆက်ဆံနိုင်သည့်အခြားဆေးဝါးများကိုသာစဉ်းစားနိုင်သည်။
Prilosec စျေးနှုန်းဆိုင်ရာသတိပေးချက်များကို sign up လုပ်ပါနှင့်စျေးနှုန်းပြောင်းလဲသည့်အခါထွက်ရှာ!
Prevacid vs. Prilosec နှင့်ကုန်ကျစရိတ်နှိုင်းယှဉ်မှု
Prevacid နှင့် Prilosec နှစ်ခုစလုံးကိုများသောအားဖြင့်အာမခံနှင့် Medicare အပိုင်း D. တို့ဖြင့်အကျုံးဝင်သည်။ များသောအားဖြင့် Rx ယေဘူယျဗားရှင်းကိုအကျုံးဝင်သည်။ OTC ဗားရှင်းကိုများသောအားဖြင့်အချို့သောအာမခံချက်များအောက်တွင်သာ (ဆေးညွန်းစာဖြင့်) ဖုံးအုပ်ထားသည်။
30 mg lansoprazole (ယေဘုယျ Prevacid) ၏ဆေးတောင့် ၃၀ အတွက် (အာမခံချက်မရှိဘဲ) အိတ်ကပ်ဈေးကဒေါ်လာ ၁၂၅ ခန့်ရှိသော်လည်းယေဘုယျဆေးညွှန်းကို ၁၅ ဒေါ်လာနှင့် ၂၀ မီလီဂရမ် omeprazole (30 ယေဘုယျ Prilosec) ရရှိနိုင်ပါသည်။ အကြောင်းကို $ 60 ဖြစ်ပါတယ်။ သင် SingleCare နှင့်အတူယေဘုယျ Prilosec အတွက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် $ 15 ပေးဆောင်နိုင်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်အာမခံဖြင့်ဖုံးလွှမ်း? ဟုတ်တယ်။ Rx ယေဘူယျအားဖြင့် OTC မဟုတ်ပါ ဟုတ်တယ်။ Rx ယေဘူယျအားဖြင့် OTC မဟုတ်ပါ
ပုံမှန်အားဖြင့် Medicare အပိုင်း D ကိုဖုံးလွှမ်း? ဟုတ်တယ်။ Rx ယေဘူယျအားဖြင့် OTC မဟုတ်ပါ ဟုတ်တယ်။ Rx ယေဘူယျအားဖြင့် OTC မဟုတ်ပါ
စံသောက်သုံးသော ဥပမာ - နေ့စဉ် ၃၀ မီလီဂရမ်ဆေးတောင့် ဥပမာ - နေ့စဉ် ၂၀ မီလီဂရမ်ဆေးတောင့်
ပုံမှန် Medicare အပိုင်း D ကို copay $ 4- $ 64 $ 0- $ 20
SingleCare ကုန်ကျစရိတ် $ 12- $ 20 $ 9- $ 20
Prevacid vs. Prilosec ၏ဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
Prevacid နှင့် Prilosec သည်လူနာများကိုကောင်းစွာသည်းခံတတ်သည်။ Prevacid ၏အသုံးအများဆုံးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ ၀ မ်းလျှောခြင်းနှင့်ဝမ်းဗိုက်နာကျင်ခြင်းဖြစ်သဖြင့်ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ Prilosec ၏အသုံးအများဆုံးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်ဝမ်းဗိုက်နာကျင်ခြင်းတို့ဖြစ်ပြီးနောက်တွင်ပျို့အန်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊
ဝမ်းဗိုက်နာကျင်မှု ဟုတ်တယ် ၂.၁% ဟုတ်တယ် ၅%
ဝမ်းချုပ်ခြင်း ဟုတ်တယ် ၁% ဟုတ်တယ် နှစ်ရာခိုင်နှုန်း
ဝမ်းလျှောခြင်း ဟုတ်တယ် ၃.၈% ဟုတ်တယ် ၄%
ပျို့ချင်သည် ဟုတ်တယ် ၁.၃% ဟုတ်တယ် ၄%
ခေါင်းကိုက်ခြင်း ဟုတ်တယ် ၁% ဟုတ်တယ် ၇%
ဝမ်းရောဂါ ဟုတ်တယ် <1% ဟုတ်တယ် ၃%
ရင်းမြစ် - DailyMed (Prevacid) , DailyMed (Prilosec)
Prevacid vs. Prilosec ၏မူးယစ်ဆေးဝါးအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု
Prevacid နှင့် Prilosec သည်တူညီသောကြောင့်၎င်းတို့သည်တူညီသောမူးယစ်ဆေးဝါးအပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုများရှိသည်။ မူးယစ်ဆေးနှစ်မျိုးလုံးသည် Coumadin (warfarin) ကဲ့သို့သောသွေးရည်ကြည်များနှင့်ဆက်ဆံသည်။ အချို့ antiretrovirals; methotrexate; စိန့်ဂျွန်ရဲ့ Wort; rifampin; နှင့် Lanoxin (digoxin) ။ အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုအချို့သည်ဆေးတစ်ခုစီအတွက်ကွဲပြားသည်။ အသေးစိတ်အတွက်အောက်ပါဇယားကိုကြည့်ပါ။ သင်သောက်သည့်ဆေးဝါးများအပေါ် အခြေခံ၍ ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်အကြံဥာဏ်များအတွက်သင့်ကျန်းမာရေးပြုစုစောင့်ရှောက်သူကိုဆက်သွယ်ပါ။
မူးယစ်ဆေးဝါး မူးယစ်ဆေးအတန်း Prevacid Prilosec
Viracept (nelfinavir) Antiretroviral ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
coumadin (warfarin) Antikoagulant ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Celexa (citalopram) SSRI စိတ်ကျရောဂါ မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်
Pletal (cilostazol) vododilator မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်
Dilantin (phenytoin) ဆေးကုသမှုခံယူ မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်
ဗယ်လီယမ် (diazepam) Benzodiazepine မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်
Theophylline Methylxanthines ဟုတ်တယ် မဟုတ်ဘူး
CellCept (mycophenolate) စုပ်ယူမှုအတွက်အစာအိမ် pH ပေါ်မူတည်ကြောင်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Prograf (tacrolimus) ခုခံအားစနစ် ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
စိန့်ဂျွန်ရဲ့ Wort rifampin CYP3A4 အင်ဇိုင်းသွေးဆောင် ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Carafate (sucralfate) အနာကာကွယ်ပေးသည် ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
Plavix platel Anti- မဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ်
Prevacid vs. Prilosec ၏သတိပေးချက်များ
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာမူးယစ်ဆေးဝါးအတန်းတွေအတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက် Prevacid နဲ့ Prilosec မှာတူညီတဲ့သတိပေးချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။
ဆေးကိုရောဂါလက္ခဏာပြခြင်းဖြင့်တုန့်ပြန်မှုသည်ကင်ဆာမဖြစ်စေရပါ။ သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် endoscopy အပါအဝင်သင့်လျော်သောစမ်းသပ်မှုလုပ်သင့်ပါတယ်။
အလွန်ပြင်းထန်သည့်တုန့်ပြန်မှုတုန့်ပြန်မှုကြောင့်ကုသမှုအတွင်းမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအလွန်ပြင်းထန်သည့် Interstitial nephritis (ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောလေးနက်သောကျောက်ကပ်အခြေအနေ) ဖြစ်နိုင်သည်။
မြင့်မားသောဆေးများနှင့်ရေရှည်အသုံးပြုမှုကြောင့်ပြင်းထန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကြောင့်လူနာများအားကုသမှုခံယူသင့်သည် အနိမ့်ဆုံးဆေးထိုး နှင့်အတိုဆုံးအချိန်အတွက် -
၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချ Clostridium difficile ဝမ်းလျှော, အထူးသဖြင့်ဆေးရုံတင်လူနာ။
PPI - ဆက်စပ်အရိုးကျိုးခြင်း၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
cutaneous lupus erythematosus (CLE) နှင့် system lupus erythematosus (SLE) တို့၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
Prevacid သို့မဟုတ် Prilosec သည်ဗီတာမင် B12 ချို့တဲ့ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
Prevacid (သို့) Prilosec သည်မဂ္ဂနီစီယမ်နိမ့်ကျနိုင်သည် (ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်အတူသို့မဟုတ်မရှိဘဲ) ။ ရှားရှားပါးပါးဖြစ်သော်လည်းများသောအားဖြင့် PPI သောက်သောလူနာများတွင်တစ်နှစ်ကျော်ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသော်လည်းကြီးလေးသောရောဂါများသည်ကြွက်သားချောင်းဆိုးခြင်း၊ ဖမ်းဆီးရမိခြင်းနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောနှလုံးခုန်သံများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
Prevacid (သို့) Prilosec သည် neuroendocrine မြင်းသရိုက်အနာကိုစစ်ဆေးရာ၌မှားယွင်းသောရလဒ်များဖြစ်စေနိုင်သည်။
Prevacid သို့မဟုတ် Prilosec သည် methotrexate နှင့်ပေါင်းစပ်ပါက methotrexate အဆိပ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
Prevacid သို့မဟုတ် Prilosec နှင့်အတူရန်ပုံငွေ gland polyps ဖြစ်နိုင်ချေပိုများသည်။
Prevacid သို့မဟုတ် Prilosec ကိုစနစ်တကျအလုပ်လုပ်ခြင်းမှတားဆီးနိုင်သည့် St. John's Wort သို့မဟုတ် rifampin နှင့်အသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်ပါ။
Plavix (clopidogrel) နှင့်သုံးခြင်းကိုရှောင်ပါ။ Prilosec သည် clopidogrel အားစနစ်တကျအလုပ်လုပ်ခြင်းမှရပ်တန့်စေလိမ့်မည်။ Plavix အစားမတူညီသော antiplatelet ဆေးကိုသုံးသင့်သည်။
သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူအားဆေးကုသမှုခံယူပါ။ အကယ်၍ သင်သည် Prevacid သို့မဟုတ် Prilosec ကိုသောက်နေပြီးသင်ကိုယ် ၀ န်ရှိနေကြောင်းတွေ့ရှိပါကသင့်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
Prevacid vs. Prilosec နှင့် ပတ်သက်၍ မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ
Prevacid, ဒါမှမဟုတ် lansoprazole, ပရိုတွန် pump pump inhibitor ဖြစ်တယ်။ ၎င်းသည်အက်ဆစ်ထုတ်လုပ်မှုကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်အက်စစ်ဓာတ်ပြုခြင်းလက္ခဏာများကိုကူညီခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ Prevacid သည်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ဆေးညွှန်းနှင့် OTC (over-the-counter) တို့ဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။
Prilosec သို့မဟုတ် omeprazole သည်ပရိုတွန် pump pump inhibitors inhibitors ဆေးများတွင်လည်းပါဝင်သည်။ ဆေးညွှန်းရော၊ ယေဘူယျရောရောရောရောရောရောရောရောရောရောရောရောရောရောရောရောရောရောရောရောရောရောရောရောရောရောရောရောရောရောရောရောရောဝင်ဝင်ဝင်သင်နိုင်သောသင်တို့၏ဆေးကိုရော၊
Prevacid နှင့် Prilosec အတူတူလား။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်မူးယစ်ဆေးဝါးအတန်းအတူတူပင်ဖြစ်သောကြောင့်သူတို့သည်အတူတူပင်အလုပ်လုပ်ကြသော်လည်းလက္ခဏာများ၊ ကုန်ကျစရိတ်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုများ၊
Prevacid သို့မဟုတ် Prilosec ပိုကောင်းသလား။ / Lansoprazole ဟာ omeprazole ထက်ပိုကောင်းသလား။
ရရှိနိုင်သည့်အချက်အလက်များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် PPIs နှစ်ခုလုံးသည်လုံခြုံမှုနှင့်ထိရောက်မှုနှင့်တူညီကြသည်။ Prevacid သည်ရေတိုတွင်အနည်းငယ်ထိရောက်မှုရှိသော်လည်းအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၊ Prevacid သို့မဟုတ် Prilosec သည်သင့်အတွက်မှန်ကန်မှုရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်သင့်ဆရာဝန်ကကူညီနိုင်သည်။
ကိုယ်ဝန်ရှိနေစဉ် Prevacid သို့မဟုတ် Prilosec ကိုသုံးနိုင်သလား။
ပြောဖို့ခက်တယ် ကွဲလွဲသောသတင်းအချက်အလက်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်မလုံလောက်ပါ။ သင်၏ OB / GYN အကြံဥာဏ်များနှင့်တိုင်ပင်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည် Prevacid (သို့) Prilosec ကိုသောက်နေပြီးသင်ကိုယ်ဝန်ရှိနေသည်ဟုတွေ့ရှိပါကသင်၏ OB / GYN နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
ငါအရက်နှင့်အတူ Prevacid သို့မဟုတ် Prilosec ကိုသုံးနိုင်သလား။
မူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ချင်းစီသည်ဆေးဝါးများနှင့် တွဲဖက်၍ အရက်ကိုတိတိကျကျသတိပေးခြင်းမရှိသော်လည်းအရက်ကိုသောက်ခြင်းသည်အချဉ်ဓာတ်ကိုမြင့်တက်စေပြီး reflux လက္ခဏာကိုပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သည်။
Prilosec နှင့် Prevacid နှစ်မျိုးလုံးသည်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောသတိပေးချက်များပါလာသည်။ သင်၏ဆရာ ၀ န်သည် Prevacid (သို့) Prilosec သို့သင်၏တုန့်ပြန်မှုနှင့်မည်သည့်ဆိုးရွားသောတုံ့ပြန်မှုကိုမဆိုစောင့်ကြည့်လိမ့်မည်။
ကူညီရန်အတွက်စားရန်အလွန်ကြီးစွာသောအစားအစာများ အစာအိမ်အက်ဆစ်ကိုလျှော့ချ ငှက်ပျောသီး၊ ဖရဲသီး (cantaloupe, honeydew); ထိုကဲ့သို့သော oatmeal အဖြစ်အစေ့တစ်ခုလုံး; ဒိန်ချဥ်; ပိန်ပရိုတိန်း; နှင့်အစိမ်းရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ (ကညွတ်၊ ကိုက်လန်၊ ဟင်းနုနွယ်ရွက်၊ ဘရပ်ဆဲလ်ပင်များ) ။
ကြော်သော၊ အဆီဓာတ်မြင့်မားသောသို့မဟုတ်စပ်သောအစားအစာများကိုရှောင်ပါ။ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီ၊ အရက်၊ ကာဗွန်နိတ်အဖျော်ယမကာများ၊ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်၊ ချောကလက်နှင့်ပူစီနံတို့ပါဝင်သည်။ အစားအစာဒိုင်ယာရီကိုသိမ်းဆည်းခြင်းသည်သင်၏ရောဂါလက္ခဏာများကိုမည်သည့်အစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာများကကူညီပေးသည်သို့မဟုတ်ထိခိုက်စေနိုင်သည်ကိုကျဉ်းမြောင်းစေရန်ကူညီလိမ့်မည်။
အထိရောက်ဆုံးပရိုတွန် pump pump inhibitor ဆိုတာဘာလဲ။
Prevacid နှင့် Prilosec တို့အပြင်အခြား FDA ကအတည်ပြုထားသောပရိုတွန် pump pump inhibitors inhibitors များလည်းရှိသည် Protonix (pantoprazole) , Nexium (esomeprazole) Aciphex (rabeprazole) နှင့် Dexilant (dexlansoprazole) ။ မူးယစ်ဆေးဝါးတစ်ခုစီသည်အက်စစ်ထုတ်လုပ်မှုကိုပိတ်ဆို့ရန်နှင့်ရောဂါလက္ခဏာများကိုသက်သာစေရန်အလားတူနည်းလမ်းဖြင့်လုပ်ဆောင်သည်၊ သို့သော်လူတိုင်းကွဲပြားသောကြောင့်သင်တစ် ဦး ထက်အခြားဆေးဝါးတစ်ခုထက် ပို၍ ကောင်းကောင်းတုံ့ပြန်နိုင်သည်။ ဆေးကုသမှုအတွက်သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာရှင်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။ အခြားလူကြိုက်များသောရင်ပူဆေးများဖြစ်သော Zantac (ranitidine) နှင့် Pepcid (famotidine) တို့သည် H2 blockers ဟုလူသိများသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးအတန်းတွင်ရှိပြီး PPIs မဟုတ်ပါ။
၃ ရက်အကြာမှာ planbကိုငါဆက်ယူနိုင်သလား
အစာစားပြီး ၃ နာရီအကြာတွင်ပုံမှန်သကြားဓာတ်
l arginine သည် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုကူညီနိုင်သလား